देबु लुइटेल आइतवार, साउन २२, २०७४ 1644 पटक पढिएको
राम्रोसँग उज्यालो पनि हुन नपाउँदै रातेलाई आमाले बोलाइन्, ‘राते ! ए राते ! यार्सा खोज्न जाने दिन छिटो उठ् भन्या ।’ आमाको चर्को स्वर सुनेपछि अल्छी गर्दै राते उठ्यो । आँखा मिच्दै यताउता हेर्‍यो । च्यामे, भुन्टी, सन्ते, भक्तेहरू त अघि बाटो लागिवरि उसका घरमा आइपुगेका रहेछन् । उनीहरूका साथमा गाउँका अरू थुप्रै मान्छे पनि आएका थिए । ‘ए, अझ उठ्या छैनस् ? उठ्, छिटो गर्’ भक्ते रातेका छेउमा गएर ठुल्ठुलो स्वरले करायो । राते पनि हत्तपत्त उठ्यो । बाहिरफेर गयो । अरू के गर्नु थियो र उसले ? सानो झोला बोक्यो । ऊ पनि हिँड्न तयार भइहाल्यो ।
‘केटाकेटीलाई अगाडि हिँडाउनु पर्छ है । लड्लान्, छोडिएलान्’ धामी बा बोले । राते र उसका साथीहरूलाई के के न भएको थियो । बुरुक्क गर्दै अघिअघि हिँडे ।जेठको महिना थियो । घाम एकै छिनमा माथि आइहाल्यो । एकै छिनमा प्रचण्ड गर्मी भयो । सबैले टन्न मालताल बोकेका थिए । बाटो असाध्यै अप्ठ्यारो थियो । पसिना तर्तरी झार्दै जसोतसो उकालो चढ्दै थिए । उनीहरूको गाउँबाट यार्सा भेटिने ठाउँमा पुग्न तीन दिन लाग्थ्यो । बाटामा खान र बस्नको ज्यादै समस्या थियो । उनीहरूलाई यार्सा भेट्नुसँग मतलव थियो । बाध्यता र बल पनि थियो । त्यसै सुरमा उनीहरू खुरुखुरु हिँडे । तर भक्ते, भुन्टी र सन्तेलाई साह्रै गाह्रो भयो । उनीहरू बाटैमा थ्याचथ्याच बस्न थाले । उनीहरूको अनुहार मलिन भयो ।
पहिलो दिन अघिअघि दगुरे पनि घरबाट हिँडेको भोलिपल्टदेखि केटाकेटीहरू राम्ररी बोल्न सक्न पनि छाडेका थिए । तीन दिनपछि बल्लतल्ल उनीहरूको यात्रा रोकियो । उनीहरू यार्सा खोज्ने लेक बाघडाँडामा पुगे । त्यहाँ पुग्दा सबैका अनुहारमा अलिअलि सन्तोष र अलिअलि तृष्णा देखियो । सबै मिलेर टहरा बनाए । आफूले ल्याएका मालताल टहराको एक कुनामा थुपारे । बाघडाँडामा त ज्यादै चिसो थियो । उनीहरू खानेकुरा तयार गर्नतिर लागे । राते, भुन्टी र च्यामे भने एकै ठाउँमा पोको परेर बसे । थकाइले होला उनीहरूले टुलुटुलु हेरिमात्र रहे, केही सघाएनन् । त्यो रात त्यसै बित्यो।
भोलिपल्ट रातेकी आमा, भुन्टेका बा सबै बाघडाँडाको भुइँतिर एकोहोरो ध्यान दिएर चाहार्दै यार्सा खोज्न थाले । हाटबजार जस्तै भीडभाड रहेछ यार्सा खोज्नेको । यस्तो देखेर राते छक्क पर्‍यो । केहीबेरपछि ऊ आमाको छेउमा गयो । अनि बिस्तारै भन्यो, ‘कति गाह्रो पो रहेछ यार्सा खोज्न ! बरु स्कुल जाँदा नै सुख थियो । यस्तो अप्ठ्यारोमा हामी किन आउनु परेको ? ’ रातेको कुरा सुनेर आमाले भनिन्, ‘के गर्नु र बाबै ! यार्सा बटुलेको पैसाले नि चामल किन्नुपर्छ । घर चलाउनुपर्छ । तिमीहरूलाई स्कुल नि पठाउनुपर्छ । रोल्पामा यति नगरे त सुख कहाँ छ र !’ आमाको कुरा सुनेर राते एकैछिन गम्भीर भयो । अनि एकछिनमा पर गएर साथीसँगै अल्मलिन थाल्यो ।
बाघडाँडामा पुगेको तेस्रो दिन थियो । उनीहरूले भर्खर यार्सा टिप्ने मेसो पाउँदै थिए । त्यसदिन अचानक बाघडाँडामा ठूलो आधीहुरी चल्न थाल्यो । डाँडै ढाक्ने गरी हिउँको बिस्कुन लाग्न थाल्यो । टहरा पनि ढल्लान्झैँ गरेर हुन्डरी आयो । सबैजना भगवान्को नाम लिँदै टहरामुनि पुगे । राते र उसका साथीहरू डर र चिसाले कालानीला भए । सबैका हातगोडा ठिहिर्‍याएर नीला भए । त्यस रात उनीहरूले आगो पनि बाल्न सकेनन् । उनीहरू रातभरि भोकै र चिसै भए ।
चिसाले अरूलाई भन्दा रातेलाई ज्यादा सतायो । उसलाई एकोहोरो खोकी पनि लाग्न थाल्यो । अरू पनि रातभर सुत्न सकेनन् । उज्यालो हुनै लाग्दा रातेलाई पखाला पनि लाग्न सुरु भयो । उसको हालत देखेर आमा आत्तिइन् । उनले सँगै गएका झाँक्री बालाई जोखाना हेर्न लाइन् । जानेबुझेको जडीबुटी पनि खुवाइन् । रातेको बिराम भने बिसको उन्नाइस भएन । सबैजना आत्तिए । वल्लापल्ला टहरामा हल्लाखल्ला चल्यो । पल्लो टहरामा बस्ने धने दौडँदै आयो । उसले आफ्नो खल्तीबाट एउटा जीवनजल झिकेर दियो । लु दिनुस् रातेलाई । बल्लतल्ल रातेले औषधि खान पायो ।
बिस्तारै उसको बिराम बिसेक हुन थाल्यो । अब भने उसले बोल्यो, ‘स्कुल जाने कलिला बच्चालाई यस्तो लेकमा ल्याउनै नहुने । न त यसले यार्सा खोज्न नै सक्छ । धन्न मैले बचेको पैसाले औषधि किनेको थिएँ ।’ धनेको कुरा सुनेपछि सबैलाई कमजोरीको महसुस भयो ।
धेरै दिनपछि आज राते स्कुल गयो । उसलाई आफ्नो यार्सा खोज्न गएको कहानी साथीलाई सुनाउने कम हतारो थिएन । रत्ति नबिराइ साथीहरूलाई सबै कुरा सुनायो । साथीहरूले खुब उत्सुक भएर सुने । तिनमा धेरै त यस पटक यार्सा खोज्न जान नपाएकाले आफ्ना बाबुआमासँग रिसाएका र अर्को साल लैजाने बाचा गराएकाहरू पनि थिए । एक कान दुई कान हुँदै यो कुरा स्कुलका शिक्षकले पनि थाहा पाउनुभयो ।
उहाँले आजको कक्षामा किताबको पाठ नपढाइ यार्सा खोज्नेहरूकै भोगाइबारे सुनाउनुभयो । उहाँसँग त रातेका भोगाइजस्ता अनुभवका धेरै फेहरिस्त नै रहेछन् । यसपछि रातेका साथीहरूले यार्सा खोज्न जाने कुरा रमाइलाका लागि होइन रहेछ भन्ने थाहा पाए । उनीहरूले मनमनै आपूm ठूलो भएपछि मात्र यार्सा खोज्न जाने संकल्प गरे ।
आइतवार, साउन १, २०७४ बाफ रे... !
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने? 2755
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलार्इ प्राथिमकता, यस्तो छ तयारी 1176
नेपाल-भारत सम्बन्ध : सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन 4526
'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य' 44015
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 24128
दिल्लीसँग बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल 102
राष्ट्रियताको बहस 393
नयाँशक्ति छाडेका नेता 'माओवादीतिरै' 6709
प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ट्‍वाइलेटमा लगेर हत्या.. 26996
खोलाको किनारमा शव भेटियो 350
आमा–आमा भन्दा भन्दै नातिनीलाई हातैबाट बाढीले बगायो.. 7172
आरजुको राहतले भूकम्पपीडित दंग 14021